SEO Nhungamiro Kubva Semalt - Mitauro Yekutsvaga Engine Engine Success Factors
Mutsara weperiodic yezvinhu zvinokonzera kubudirira kweSeO, inotaura kuti pane mapoka makuru matatu: pane-peji SEO, pane-peji SEO, nekuputsika. Muchikamu chimwe nechimwe chemazvikwata chakataura, pane mamwe masangano akaitwa naOlver King, Mutengi weKutengi Kwemutengi we Semalt , achatsanangura. Masangano acho ane zvinhu zvinorehwa nekubudirira kweSeO campaign.
SEO Factor Misangano
Hapana chinhu chimwe cheSeO chichaita kuti mumiriri wewebhu webhusaiti ave nechikwata chakakwirira mumajini ekutsvaga - ð´ð¸ð²ð°ð½ ð¼ð¾ð´ñð»ñð½ñð¹. Nokuva nechokwadi chokuti munhu ane zita guru re HTML haazotaridzi peji zvakanaka kana risina zvinyorwa zvinotevera. Mumwe angave ane hukama hwakawanda kwazvo, asi kana asingadzosere kuhutano uye achiita zvayo, haabatsiri. Zvinoreva kuti munhu anoda kubatanidza zvimwe zvinhu zvakanaka, kuwedzera mukana wekubudirira. Izvo zvinowedzera zvinhu zvisina kunaka, zvakanyanya kuipa.
Pa-Peji Kubudirira Kwezvinhu
Izvi ndizvo zvikonzero zviri mukati mekutonga kwemuridzi kana vashanduri. Muwe webhusaiti anofanirwa kuongorora zviri zvavanoparidza, iyo HTML cues yavanoshandisa kubatsira mabhizimisi ose uye vashandisi kuti vasarudze kuwirirana. Uyewo, munhu anofanirwa kuve nechokwadi chekuvakwa kwewebsite inoita kuti zvive nyore uye kusununguka kwekufamba uye hazvifaniri kudzivisa basa rezvinjini.
Kupera-Peji Kubudirira Kwezvinhu
Muparidzi haatungamiri zvakananga zvinhu izvi. Tsvaga injini dzinowanzoshandisa peji-peji zvinhu sezvazvakaona kuti kuvimba nemuparidzi chete haana kupa chiitiko chakanakisisa kune vashandisi, uye vashanyi..Muenzaniso ndeye vadzidzisi vepanzvimbo vanoedza kuzviita sevanonyanya kukosha kupfuura zvavari chaizvo. Kune mawebsite akawanda anotsvaga injini dzinoda kutamba. Kutarisa pazvinhu zvose hazvina kukwana kuziva kana mapeji akakwirira kumusoro kweSERP ndiyo yakanaka kana kwete. Vashandisi vepaIndaneti vanoitawo tsvakurudzo dzakasiyana-siyana dzinotsvaga injini dzekutsvaga kuti dzisiyanise maitiro avo zvakare.
SEO Chisimba uye Kutarisa Mhosva
Chinangwa chikuru chenjini yekutsvaga ndechekuti vaone kuti vanhu vanovandudza tsvakurudzo dzavo. Vanopa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinobatsira kuti vaone kuti vanobudirira zvizere. Zvakawanda sekubudirira kwekutsvaga kutsvaga chinangwa chavo, pane avo vanoshandisa nzira dzinonzi "chifukidzo chine mutsvuku" kana kuti "spam" chinangwa chekuti nzvimbo ionekwe kupfuura zvazviri chaizvo. Kune zvimwe zvikwereti kune mawebhusayithi akawanikwa kuti aite saizvozvo. Chinonyanya kuitika ndechekuti dzinorambidzwa zvachose nekukambaira nekutsvaga injini. Kuputsika kunowanzoita chero basa ripi zvaro rakanyengerwa kunonyengedza kutsvaga injini kuti icheke kana kushandisa kunzwisisa kwayo kwezvakakosha kana zvinyorwa.
Kurema kutsvaga kutsvaga tsanangudzo
Zviitiko zvinosvika pakati pe1 kusvika ku 3. Vanhu vanoda kubhadhara zvinhu izvozvi nezvikamu zve 3. Avo vanorema 1 kana 2 havasi izvo zvisingabatsiri. Izvo chete ndezvokuti hazvikoshi zvakanyanya. Kuita zvechisimba kunoremawo, asi kuburikidza nenhamba dzisina kunaka.
"Kusina" SEO Zviitiko
Mamwe maOOs ane ruzivo angabvunza kuti sei zvimwe zviratidzo zvisingaratidzi. Chikonzero chakapiwa neGoogle ndechekuti vamwe vavo havana kukosha. Somuenzaniso, pane zviratidzo zvinopfuura 200 zvinoshandiswa neGoogle uye zvinopfuura 10 000 pasi-zviratidzo. Mhedziso haisi kuisa chokwadi kuti inobatanidza chimwe nechimwe chezviratidzo izvi. Kuva ultra-yakanganisa kunogona kukonzera matambudziko kune injini yekutsvaga.